Akhriso Bayaan Alshabaab ay kasoo saartay Weerarkii Hotel Afrik. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Akhriso Bayaan Alshabaab ay kasoo saartay Weerarkii Hotel Afrik.
Last updated Feb 2, 2021 568 0
Xafiiska warfaafinta Xarakada Al Shabaab ayaa bayaan kasoo saaray weerarkii dagaalyahannada Alshabaab ay ku qaadeen hotel Afrika.
Bayaanka oo ku qornaa Af Soomaali ayaa ahaa sidan:-18 Jumada Thani 1442H (31 January 2021) – Ciidamada Mujaahidiinta oo Allaah kaashanaya ayaa waxay galabta weerar ku qaadeen xarun kamid ah xarumaha cadawgu ku leeyahay Magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan kooxda ridada ah.
Weerarka oo iskugu jiray camaliyad istish-haadi ah iyo inqimaasiyo ayaa Allaah fadligiis sidii loo qorsheeyay u dhacay. Waxaa Mujaahidiinta u suurtagashay inay gacanta ku dhigaan xaruntii bartilmaameedku ahaa kadib markii ay cagta mariyeen ilaaladii halkaas ku sugnayd.
Weerarka ayaa qaatay muddo saacado ah waxayna Mujaahidiintii xarunta qabsaday dhawr jeer oo isxigxigta jebiyeen ciidamadii kala duwanaa ee kusoo yaacay xarunta si ay u badbaadiyaan madaxdoodii halkaas ku dhuumaalaysanaysay.
Tirakoobka hordhaca ah ee weerarku wuxuu cadaynayaa in cadawga halkaas looga dilay 23 xubnood, dhaawucuna uu gaarayo 40. Waxaa kale oo jira burbur xooggan oo gaaray xaruntii la beegsaday.
Mid kamid kamid xubnaha ugu muhiimsan ee cadawga looga dilay hawlgalkaas waa Jeneraal Maxamad Nuur Galaal, kaas oo ahaa bartilmaameedka koowaad ee hawlgalkaas.
Galaal ayaa muddo dheer waxaa uu ahaa nin u heellan loona soo carbiyay la dagaalanka ku dhaqanka Shareecada Islaamka, waxaa uu aqoontiisa iyo khibradiisa dhanka sirdoonka ciidamada ah u adeegsan jiray inuu kula dagaalamo Mujaahidiinta. Waxaa uu ku lug lahaa hagardaamooyin dhawr ah oo ay gaaladu ku dileen rag Mujaahidiin ah. Waxaa raggaas kamid ahaa Macalim Aadan Xaashi Cayrow – Allaha shahaadadiisa haka aqbalee – kaas oo ku shahiiday duqayn ay Maraykanku ka geysteen Magaalada Dhuusamareeb bishii May 2008.
Wuxuu sidoo kale ku lug lahaa abaabulka dagaallo ka dhan ah Mujaahidiinta, wuxuu kaalin lixaad leh ka qaatay abaabulka maleeshiyaad mushrikiin ah oo ay xabashida Itoobiya ku dhistay kuna hubaysay gobollada dhexe, wuxuu dadaal xooggan ku bixiyay yagleelidda waxa loogu yeero maamulka Galmudug ee ashahaado la dirirka ah.
Kadib saddex iyo toban sano oo ay Mujaahidiintu ku raadjoogeen, ugu dambayntii galabta ayay Mujaahidiintu ugu dheceen qolkii uu ku dhuumaalaysanayay ee xarunta uu ka deganaa Magaalada Muqdisho, halkaas ayayna kusoo afjareen taariikhdiisii dheereeyd ee ku dhisnayd gaala kalkaalnimada, Shareeca la dagaalanka iyo dhiigyacabnimada.
Dilka Jeneraal Galaal waxaa ay cadaalad siinaysaa agoon badan oo uu aabayaashood xaqdarro ku laayay, hooyooyin badan oo uu ubadkoodii gumaaday iyo cid walba oo dhibane u noqotay hagardaamooyinkiisii.
Ugu dambayntii, waxaan halkaan digniin uga soo jeedinaynaa cid walba oo ku dhiiratay una soo qalab qaadatay la dagaalanka ku dhaqanka Shareecada Islaamka. Waxaan idin leenahay Ilaahay u tawbad keena, kana soo laabta dhabaha qalloocan ee aad ku socottaan. Ku waana qaatta wixii ku dhacay kuwii dariiqaas idinka horeeyay kuna halaagsamay oo uu Galaal kamid yahay.
Hadii aad sidaas yeeli waysaan, ha dheeraatto ama ha dhawaattee gacanta Mujaahidiintu way idin soo gaari doontaa, waxay idinkugu soo geli doonaan goob walba oo aad ku dhuulaamaysanaysaan, waxaadna la kulmi doontaan ciqaabta aad mudantihiin insha-Allah.